Factory vokatra herinaratra - Mpanamboatra vokatra herinaratra any Shina, mpamatsy
Ity vokatra ity dia karazana mainty lalina, tsy misy solvent (tsy misy tsirony), fiarovana ny tontolo iainana, tsy mampidi-doza amin'ny vatan'olombelona, ​​fisehoan'ny mucilage tsy ara-dalàna. Ampiasaina amin'ny fiarovana nasionaly sy ny solika, indostrian'ny simika, tobin-tsolika, trano fitehirizana, trano fitehirizana mampidi-doza ary toerana mampidi-doza amin'ny fipoahana, toy ny mpiasa fantsom-pifandraisana na tariby
Izy io dia ampiasaina amin'ny fitokanana sy fanamafisana ny porofo. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny famonosana tariby, mpiray, tariby, fantsona, tariby amin'ny tany sns mba hisorohana ny afo.
Fitaovana fampidirana organika azo ovaina amin'ny famehezana fireproof tsy azo ovaina
Ny tanimanga afo dia antsoina koa hoe fitaovana fireproof plugging, izay azo zaraina ho kitapo sy boaty. Ny fitaovana dia ampiasaina indrindra amin'ny fametahana ny lavaky ny tariby sy tariby mba hisorohana ny afon'ny tariby sy ny tariby miparitaka amin'ny lavaka mankany amin'ireo efitrano mifanila aminy ary hampihena ny fatiantoka afo. Izy io dia manana ny asan'ny fisorohana setroka, fisorohana afo ary fisorohana vovoka. Noho izany, ny fitaovana fampidirana dia ampiasaina betsaka amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra, orinasa indostrialy sy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, tranobe avo lenta, fahefana amin'ny fanamboarana sambo, paositra sy fifandraisan-davitra, fikajiana, metallurgy ary injenieran'ny rafitra hafa.
Fitaovana tsy mitohana fireproof tsy mitongilana, fantatra koa amin'ny hoe fitaovana fireproof fametrahana haingana.
Matetika izy io dia antsoina hoe fitaovana fireproof fametrahana haingana
Ity vokatra ity dia mety amin'ny fisorohana afo amin'ny tariby herinaratra sy fifandraisana, izay misy dikany lehibe amin'ny famongorana ireo loza miafina, miantoka ny fiasan'ny tsipika fampitana herinaratra sy fizarana ary ny tsipika fifandraisana. Ny kasety famonoana afo-namboarina novokarin'ny orinasanay dia karazana vokatra maharitra maharitra afo ho an'ny tariby herinaratra sy fifandraisana. Izy io dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny hazakazaka amin'ny afo sy ny fandoroana afo, ny fametahana tena ary ny fahaizan'ny miasa. Tsy misy poizina izy io, tsy misy tsirony ary tsy misy fandotoana ampiasaina, ary tsy misy fiatraikany amin'ny fahaizan'ny tariby amin'izao fotoana izao amin'ny fiasan'ny tariby. Satria ny kasety fireproof mametaka tena dia ampiasaina hamonosana ny tampon'ny rakotra tariby, rehefa misy ny afo dia afaka mamorona sosona karbonika haingana misy fanoherana oksizenina sy insulation hafanana izy io, izay manakana tsara ny tariby tsy hirehitra.
Ny fantsom-pandrefesana tariby tariby karazana CDDT-AA dia karazana firakotra ahi-afo vaovao novolavolain'ny orinasanay araka ny fenitry ny minisiteran'ny filaminam-bahoaka GA181-1998. Ny vokatra dia voaforona karazan-afo maharitra, plastika sns. Izy io dia ny tariby mandeha amin'ny rano sy mandeha amin'ny herinaratra any amin'ny firenena. Io vokatra io dia afaka mamokatra insulate foam vita amin'ny spaonjy rehefa mafana. Afaka manakana sy manakana ny fihanaky ny fiparitahan'ny lelafo sy hiaro ny tariby sy ny tariby izany. Ny tombony lehibe dia ny: fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy fandotoana, tsy misy poizina ary tsy misy tsirony, tsy misy atahorana ny fahasalaman'ny mpiasa misarona. Ity vokatra ity koa dia manana ny mampiavaka ny firakotra manify, ny firaiketam-po mahery, ny fahalalahana tsara, ary ny fiasa tsara sy ny fanoherana ny harafesina.